I-Wooda House - I-villa enhle yamapulangwe olwandle
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Mon And Maayan
Ikhaya lethu ngokungangabazeki lingenye yezindlu ezinhle kakhulu futhi eziyingqayizivele e-Koh Lanta, esendaweni yabadobi bangempela e-Old Town. Uma ufuna ulwazi lwasendaweni lwangempela, kodwa ngesitayela nokunethezeka, ikhaya lethu liyindawo yakho.
Indlu inendawo yokuhlala engaphakathi engu-108 m2, nendawo engaphandle yedekhi engu-114 m2, esakazwe phezu kwezitezi ezi-2. Ingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayisi-6, aba-2 ekamelweni ngalinye kulawa amabili okulala naba-2 ekamelweni lokuhlala. Indlu inezinto eziningi ezihluke kakhulu ongase ungazitholi ezindaweni zonke, njengezindonga zokhuni ezinezingqimba, amafasitela avalekile, iminyango eshelelayo yaseThailand yendabuko, iziqu zezihlahla njengezinsika ezisekelayo namagatsha njengezakhi zefenisha nezinsimbi. Okuhlangenwe nakho kwethu ukuthi kuthatha izivakashi zethu amahora ambalwa ngaphambi kokuba zizizwe zisekhaya, njengoba zivame ukuzithola ekuqaleni zikhexiwe ubuhle nomkhathi wendlu kanye nombono odonsa umoya.
Kuwo wonke amagumbi endlu kanye nedekhi yangaphandle ungajabulela i-wifi yekhwalithi enhle. Uma uhlala nathi isikhathi esingaphezu kweviki, sihlinzeka ngesevisi yokuhlanza kanye ngeviki ukuze senze ukuhlala kwakho kujabulise.
Indlu ngokujwayelekile AYIZIFANELE izingane ezincane kakhulu. Zombili izitezi ziziqhenya ngompheme omkhulu ABANGABIYWE. Ngakho-ke, kunengozi engokoqobo yokuwela olwandle uma kunegagasi elikhulu, noma okubi nakakhulu, emadwaleni lapho amagagasi aphansi. Uma ukhetha ukubhukha indlu nezingane zakho, qiniseka ukuthi zikhule ngokwanele ukuba ziqonde ingozi futhi ziziphathe ngendlela efanele. Noma, zimisele ukubukela ingane yakho.
Sicela futhi uqaphele ukuthi AKUKHO umoya opholile endlini. Indlela evulekile eyakhiwe ngayo indlu, ivumela umoya ohelezayo wasolwandle omningi futhi baningi abalandeli abazokupholisa. Kodwa uma i-air conditioning iyadingeka kuwe, indlu yethu ayifaneleki.
4.94 ·229 okushiwo abanye
4.94 · 229 okushiwo abanye
Le ndawo ingenye yezindawo eziyiqiniso zasendaweni zaseThailand ezisatholakala e-Koh Lanta. Indawo eningi yezivakashi itholakala ogwini oluseNtshonalanga yesiqhingi, eduze namabhishi. Kepha indawo yethu inendawo ethule egcwele imvelo ogwini olusempumalanga, ekuhambeni ibanga ukusuka eDolobheni Elidala elihle nelinomlando, lapho uzokwazi ukuthola izindawo zokudlela eziningi ezinhle, izitolo zezikhumbuzo, izimakethe zegrosa, massage, ikhemisi, 7- 11 nangaphezulu. Umakhelwane unolwandle ngakolunye uhlangothi, nezintaba, izihlahla zenjoloba namahlathi ngakolunye. Ungaya ukugijima okuhle phakathi kwezihlahla zenjoloba noma uhambe phansi olwandle lapho igagasi liphansi. Kuyinto evamile ukuhlangana nezinkukhu, amadada, amakati amaningi, izinja ngisho nezinkawu!
Omakhelwane bakho bayibhodwe elincibilikayo labadobi baseThai Muslim, abathengisi baseThai Chinese, ama-Sea gypsies, ama-expats nezinye izivakashi. Umakhelwane uyindawo ethule ngempela, kodwa lungiselela imisindo yempilo yendawo yaseThailand: amagagasi, izinyoni, amakhilikithi, amaconsi emvula, izinjini zezikebhe, amaqhude, imithandazo evela eMosque yendawo noma ithempeli lamaBuddha noma izingane nje ezidlala ngaphandle.
Nakuba sitholakala emanzini, ngokuvamile akunconywa ukubhukuda. Ukuze ubhukude, kufanele uvakashele ngaphesheya kwesiqhingi, cishe amakhilomitha ayi-10 ukuya ogwini oluseduze kakhulu, noma uqashe i-kayak futhi uye eziqhingini eziphambene, eziqhele ngamaminithi angu-45 ngokugwedla.
Ibungazwe ngu-Mon And Maayan
Siyajabula ukuba lapho ezivakashini zethu futhi sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi unokuhlala okujabulisayo.
Siyohlala sihlangana nawe lapho ungena futhi sikunikeze ulwazi mayelana nendawo yokuhlala, indawo ezungezile kanye nesiqhingi.
Ngemva kokungena kwakho sisenkonzweni yakho eku-inthanethi ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo futhi sikusize uhlele noma yini, njengokuqasha izithuthuthu, izinto zokuhamba eziya noma ezisuka esikhumulweni sezindiza, uhambo lweziqhingi ezingu-4 noma isifundo sokutshuza. Ungaphinda uzame amakilasi okupheka esitayela sendawo ka-Mon, lapho ufunda khona ukupheka ukudla kwe-Thai kwangempela endaweni ejabulisayo nenethezekile. Ulwazi oluthe xaxa ngalokho ku-insta yethu noma iwebhusayithi yokupheka noMon (cookingwithmon)
Uma kukhona okudingayo, sicela usazise, singase sikwazi ukukusiza!
Siyohlala sihlangana nawe lapho ungena futhi sikunikeze ulwa…
UMon And Maayan Ungumbungazi ovelele
Izilimi: Nederlands, English, Français, Deutsch, עברית, Bahasa Indonesia, Melayu, ภาษาไทย